प्रत्येक १० बालबालिकामध्ये झण्डै ९ जनाको देखिन्छ दाँतमा समस्या, उपचार कसरी गर्ने (भिडिओ) :: डा. अजय न्यौपाने :: Setopati
बिहान बेलुका ब्रस गरे मात्र दाँतको समस्याबाट ५० प्रतिशत जोगिन सकिन्छ
डा. अजय न्यौपाने
बच्चा जन्मिएको ६ महिनादेखि ९ महिनामा पहिलो दाँत देखिन्छ। बच्चा साढे २ वर्ष पुग्दा २० वटा दाँत आइसक्छन्।
बच्चा २ देखि ६ वर्षसम्मको पुग्दा स्थायी दाँत दुई वटा थपिन्छ। १२ वर्ष पुग्दा उसको सबै दुधे दात फेरिएर स्थायी दाँतसहित २४ वटा दाँत मुखमा देखिन्छ। १५ देखि २५ वर्षसम्म बच्चाको सबै दाँत आइसक्छन्।
२५ वर्षपछि नयाँ दात आउँदैन। अहिले बालबालिकामा दाँतको समस्या धेरै देखिन थालेको छ। बालबालिकाको दाँतमा अभिभावकले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। जंक फुड, चकलेट, चाउचाउले बच्चाको दाँतमा समस्या देखिएको छ।
दाँत माझ्ने कुरामासमेत अभिभावक र शिक्षकले खासै ध्यान दिएको हुन्न। अहिले सर्वे गर्ने हो भने १० मा झण्डै ९ जना बालबालिकाको दाँत किराले खाने समस्या छ।
बच्चाको दाँत आउन ६ महिनादेखि सुरू हुन्छ। कहिलेकाही दाँत आउने क्रममा बिभिन्न समस्या देखिन्छन्। गिजा छेडेर आउने भएकाले ज्वरो आउने, बान्ता हुने र पखाला चल्ने हुन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। १० मध्ये १ बच्चामा यस्तो समस्या देखिन्छ। यो विस्तारै ठीक हुन्छ।
दाँत कुहिएमा, समयभन्दा पहिला झिकेमा अन्तैबाट दाँत आउँछ।
समयमै बच्चाको दाँत परीक्षण गर्नुपर्छ। जे आवश्यकता छ त्यसलाई आधार बनाएर उपचार गर्नुपर्छ। दाँत झर्ने र आउने एउटा निश्चित समय हुन्छ। कुनै कुनै बेला आउने समयमा आइरहेको छ, तर झर्ने समयमा दाँत नझर्न पनि सक्छ। समयभन्दा अघिनै दाँत निकालेमा यस्तो समस्या हुन्छ। त्यस्तो भएमा नयाँ दात त्यो ठाउँमा आउन सक्दैन।
बच्चालाई २ देखि साढे २ वर्षमा परीक्षण गर्न सकियो भने दाँतको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ।
सरकारले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विभिन्न जनचेतना फैलाउन सक्छ। यसबारेमा पाठ्यक्रममै राख्न सकिन्छ। आमा समूह, महिला स्ववयसेवीकाले पनि जनचेतना दिन सक्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि दाँतको रोकथामनै महत्वपुर्ण हो।किनकि, दाँतको उपचार महंगो छ।
दिनमा दुई पटक दाँत माझ्न सकियो भने यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
जब बालबालिकाले चपाएर खान सुरू गर्छन् त्यसपछि धेरै समस्या आउँछ। ५ देखि ७ वर्षका बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै समस्या हुन्छ। यसले शारीरिक मात्रै होइन मानसिक रूपमा समेत समस्या पार्छ।
बालबालिकाले चपाएर खान सक्दैनन्। जसले गर्दा उसको शरीरमा पौष्टिक तत्व पर्याप्त हुँदैन। त्यो सँगै मानसिक समस्या पनि उसलाई पर्छ। दैनिक बिहान बेलुका दाँत सफा गर्नुपर्छ। बिहानभन्दा पनि बेलुका माझ्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेमा अहिलेको समस्यालाई ५० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ।
बालबालिकाको दाँतमा देखिने समस्याबारे हामीले भरतपुर अस्पतलाका दन्तरोग विभागका प्रमुख तथा साइराम डेन्टलका सञ्चालक डा अजय न्यौपानेसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, १९:२९:००